Raha Tsy Manan-tsiny I Moubarak, Iza No Nanome Baiko Nampamono Ireo 900 Maty Nandritry Ny Revolisiôna Ejiptiana? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Desambra 2014 7:29 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, বাংলা, čeština , Nederlands, Magyar, 繁體中文, 简体中文, عربي, English
Miverina an-dalambe ireo Ejiptiana taorian'ny nilazan'ny fitsarana iray fa afaka madiodio tamin'ny resaka famonoana mpanao hetsi-panoherana ny fitondràny nandritra ilay revolisiôna tamin'ny 25 Janoary ilay filoha Ejiptiana teo aloha, Hosni Moubarak. Nesorina ihany koa ireo vesatra nianjady tamin'i Moubarak sy ireo niaraka voaheloka taminy izay ahitàna ny Minisitry ny Atitany, Habib Eladly sy ireo zanany roalahy, noho ny resaka kolikoly nifamatotra taminà raharahanà entona niarahany tamin'i Israely.
Ho an'i Mada Masr, nesorin'ireo mpitsara amin'izao fotoana izao ireo vesatra natao an'i Moubraka, “tamin'ny nilazàna fa nisy tsy nety ny fizotry ny dingana ara-pitsaràna nataon'ireo mpampanoa lalàna.”
Tao amin'ny Twitter, nitohy niraraka nandritry ny andro tontolo ireo fanehoan-kevitra. Ao anatin'ny tafatafa voalohany nataony ho an'ny fahitalavitra, milaza i Moubarak fa tsy nisy zavatra tsy nety nataony. Mampahatsiahy azy i Johnathan Moremi :
Tsy tsaroanao mihitsy hoe nanao zavatra tsy nety ianao tamin'ny #jan25 ve r'Ing #Mubarak?. Eto, aleo ampiako ianao. (Photo @mosaaberizing) pic.twitter.com/QGVHpx5K3l
Nandritry ny andro 18 nitroaran'i #Egypt, 840 ireo olona nanàla an-tsitrapo ny ainy tamin'ny fandehanana nanandrify ny balan'ny polisy sy ireo fiaran'ny mpitandro filaminana.